Maxaad Ku Dooran Lahayd!!!!! “Sheeko Aad Iyo Aad U Xikmad Badan” | shumis.net
Home » islam » Maxaad Ku Dooran Lahayd!!!!! “Sheeko Aad Iyo Aad U Xikmad Badan”
Maxaad Ku Dooran Lahayd!!!!! “Sheeko Aad Iyo Aad U Xikmad Badan”
Waxa la wariyaa in ay gabadh ka soo baxaday gurigeeda goor barqo ah waxyar markay ka soo socotay gurigeeda waxay dariiqa kula kulantay sadex nin oo waawayn xaga da’da mid kastana gadhkii cadaaday oo aan lagu ogayn tin madaw .
Haweenaydii waxay dareentay in ragan odayaasha ah ay diif badan iyo dihaal ka muuqdo ka dib waxa ay ku tidhi waan arkaa duruufta wajigiina ka muuqata markaa soo dhawaada oo kaalaya aan waxaad cuntaan iyo waxaad cabtaan idin siiyee?
Si kalsooni leh ayay sadexdii oday ugu jawaabeen oo waxay haweenaydii ku yidhaahdeen: ma joogaa ninkii guriga lahaa? gabadhii waxay ku jawaabtay may ee guriga dibadiisa ayuu jiraa dabadeeto waxay ugu jawaabeen markaa ma gali karno guriga hadii aanu ninkii masuulka ka ahaa joogin.
Hadal macquula oo meesha leekaa ! haweenaydii iyana garawsatay oo aqbashay arinkii waanay iska sii wadatay socodkeedii si ay hawl maalmeedkeeda suuqa uga soo qabsato oo adeegii xaafada usoo iibiso.
Markay hawleheeda ka soo qabsatay suuqa iska na soo noqotay dib ayay u soo qaaday wadiiqadii ay gurigeeda ay us oo mari jirtay walina aragtay odayadii oo fadhiya iskana waydaaratay .
Markay Xiligii qadadii gaadhay ayaa odaygeedii yimid oo ay u sheegtay sheekadii maanta ay la kulantay waxaana uga warantay hasaawihii dhex maray iyada iyo odayadii waawaynaa , markay sheekadii u dhamaysay saygeedii si kalsooni leh ayuu gabadhii ugu yidhi intood baxdo waxaad u sheegtaa odayada inaan imid , si ay wax inoola cunaan gabadhu qaadatay arinkii saygeeda dibadiina u baxday una sheegtay odayadii in saygeedii yimid sidaa darted ay guriga soo galaan si ay wax u cunaan .
Markale ayay odayadii so qadimeen dalab kale waxaanay gabadhii u sheegeen inaanay sadexdooda markaliya guriga ay soo wada gali Karin ee ay midkood ka doortaan oo ay kaas casuumaan .
Dabadeeto midkoodii hore ayaa qaatay hadalka ayaa yidhi waxaa aniga la i yidhaa ‘GUULEED’ saxiibkaygan kalena waa ‘TAAJIR’ saxiibkaygan kalena waa ‘KALGACAL’ markaa sadexdayada kaad dooranaysaan idinka ayay idiintaalaa .
Gabadhii sidii caadada ahayd ayay ku noqotay saygeedii waxaanay usheegtay dalabyadii ay soo qadimeen sadexdii oday ka dibto ninkii warka xaaskiisa waa ku farxay waxaanu sheegay inay u yeedho ‘TAAJIR’ waayo waxa uu gurigeena ka buuxin doona dhaqaale iyo hodontinimo gabadii dabadeeto waxay ku jawaabtay ma waxaad doonaysaa inaad si fudud aduunyo ku helno , maxaad inoogu yeedhi wayday ‘GUUSHA’ isaga ayaa inoo horseedaya Hodontinimada iyadoo doodaasi ay dhexmartay lamaanahaasi ayaa waxaa si fudud jawaab u soo tuurtay inantoodii yarayd oo dhagaysanaysay .
Waxay tidhi aabo iyo hooyo miyaanay haboonayn in aad inoogu yeedhaan ‘KALGACALKA’ lahasho iyo kalgacaltooyo kadib labadii waalid waxay isla qaateen inay dalabka gabadhooda yar qaataan kadib gabadii intay baxday ayay u yeedhay ‘KALGACALKA’ waxaanay tidhi anagu waxa aanu dooranay inaan marti galino ‘KALGACALKA’ marka ay halkaasi marayso ayaa waxaa istaagay ‘KALGACALKII’waxaanu ujeedsaday halkii afaafka gurigu ahaa si lama filaan ah ayaa waxaa u raacay labadii kale eek ala ahaa ‘GUULEED’ iyo ‘TAAJIR’ .
Gabadhii iyada oo yaaban ayay tidhi waxaad igu tidhaahdeen waa inaad midkaayo dooraataa hadana marka aan doortay ‘KALGACALKII’ waad isoo wada raacdeen maxaad isu soo wada raacdeen ? dabadeeto waxay ku jawaabeen labadayada kale hadii aad u yeedhi lahayd ‘TAAJIR’ ama ‘GUULEED’ mid kastaa isaga oo kali ah ayuu ku raaci lahaa.
Laakiin waxaad u yeedhay ‘KALGACALKA’ markaa meel kasta oo uu tago kalgacalku waanu raacnaa labadayaduba maxaa yeelay kalgacalku isaga ayaa dhala guusha guushuna iyada ayaa horseeda hodontinimada dhadhana malaha hodontinimo bilaa guuli sida oo kele macno maleh guul kasta oo la yagleelo oo aan ku jihaysnayn waxaad jeceshahay .
Maxaad Ku Dooran Lahayd!!!!!!!!!!
Title: Maxaad Ku Dooran Lahayd!!!!! “Sheeko Aad Iyo Aad U Xikmad Badan”